Andry Rajoelina: « Tsy misy intsony ny kaominina ho hadino amin’ny asa fampandrosoana » – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:50
Accueil/Politika/Andry Rajoelina: « Tsy misy intsony ny kaominina ho hadino amin’ny asa fampandrosoana »
Andry Rajoelina: « Tsy misy intsony ny kaominina ho hadino amin’ny asa fampandrosoana »
Namarana ny diany tao amin’ny Faritra Analanjirofo, ny fitsidihina ny kaominina Vohilengo, ny Filoha Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy. Natolotry ny Filoha ny Ben’ny Tanàna sy ny vahoakan’i Vohilengo ny baka nampantenainy.
Efa ho valo taona no tsy nisian’ny baka misahana ny fitaterana ireo fiara vaventy mpitondra vokatra tao amin’ny kaominina Vohilengo, Fenoarivo Atsinanana. Natao maoderina sy mora kojakojaina izany baka izany ary ny zanak’i Vohilengo ihany no hitantana azy. Mitentina 200 tapitrisa ariary ny baka. Natao maoderina mandeha amin’ny maotera izany, mba tsy ho mora simba sy ho mora kojaina. Nanambara ny Filoha Andry Rajoelina fa « hamboarina ny lalana mirefy 17 km mampitohy an’i Vohilengo amin’ny kaominina Saranambana ary Miorimivalana. Haorina ao an-toerana koa ny hopitaly manara-penitra ahitana toeram-pandidiana hanala fahasahiranana ireo mponina ». Nanteriny fa tsy misy intsony ny kaominina ho hadino amin’ny asa fampandrosoana, nandritra izao lanonana izao.
Rajoelina nanolotra ny baka ho an’ny mponina.
Fitokanana EPP manara-penitra: « Dieny mbola kely ny ankizy dia zarina hanana zavatra manara-penitra»
Nisy koa ny fitokanana ny EPP manara-penitra tao amin’ny fokontany Ampasimpotsy, nandritra ny dian’ny Filoha tao Fenoarivo Atsinanana. « Dieny mbola kely ny ankizy dia zarina hanana zavatra manara-penitra », hoy ny Filoha. EPP manara-penitra misy efitrano fianarana 12, mahazaka mpianatra 600 no notokanana. Ahitana trano famakiam-boky misy ireo fitaovana informatika, kianja filalaovana, mba ho tia karokaroka ary hanana ny toe-tsaina zatra fifaninanana ny zanaka malagasy. Hosantarina ety anivon’ny EPP manara-penitra ihany koa ny taranja fianarana tantara an-tsehatra, mba ho tanora sahy no ho volavolaina. « Mbola hiresaka amin’ny mpampianatra aho momba ny Rakibolana, mila mahay manazava teny dimy farahakeliny ny ankizy », hoy ny Filoha. Nitafa tamin’ireo mpianatra hanala fanadinana Cepe hatao ny 15 septambra izao. Nambarany fa hahazo Rakibolana avy amin’ ny Fanjakana ny mpianatra rehetra any an-toerana.
Manaraka ny vanim-potoana ireo fitaovana ampiasaina amin’ny EPP
CHRR Fenoarivo Atsinanana: « Ataontsika laharam-pahamehana hatrany ny fahasalamana »
Nitsidika ny Hopitalibe ao Fenoarivo Atsinanana ny Filoha sy ny mpiara-dia aminy. Sambany no nisy ny Filoham-pirenana nandalo tany an-toerana. Nandresy ny covid-19 ireo mpitsabo teto amin’ny Hopitaliben’i Fenoarivo Atsinanana. Sitrana ary efa nody avokoa ireo marary notsaboina tany. Mitohy anefa ny ady ary izany no hamatsiana fitaovana ny hopitaly sy ireo CSB miisa 37 ao amin’ny Faritra. Natolotra ny hopitaly ny milina fanaovana « radiologie numériques » sy ny « respirateur » ary ny fiara fitondrana marary arifomba, mba hamonjena ny mponina. « Ataontsika laharam-pahamehana hatrany ny fahasalamana. », hoy ny Filoha Rajoelina. Nankasitraka sy nisaotra mivantana ny mpiasan’ny fahasalamana koa ny tenany manoloana ny ady amin’ny Covid-19. Hojerena miaraka amin’ny minisitra ny mety hanarenana ny tafon’ny hopitaly izay simban’ny ranomasina. “Matoky aho fa mendrika zavatra tsara ny vahoakan’ny Fenoarivo Atsinanana”, hoy izy nanamafy. Nanome tambin-karama ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana tao an-toerana ny Filoha ho fankasitrahana azy ireo.
Nahazo fitaovana ny hopitaly.
Oniversite ao Sahorana: Hisokatra ny lalam-piofanana fambolena sy fitantanana
Nitsidika ny fandrosoan’ny asa fanamboarana ny Oniversite Sahorana ao Fenoarivo Atsinanana ny Filoha. 37,5 % no vita amin’izao fotoana izao. Sampan’ny Oniversiten’i Toamasina izy ity ary lalam-piofanana roa no hanokatra ny fianarana amin’ity oniversite aorina ho an’Analanjirofo eto Sahorana ity amin’ny taom-pianarana ho avy izao dia ny fambolena sy ny fitantanana. Mandroso ny asa ka ho vita amin’ity taona ity ny fanorenana. Ary hampitomboina miandalana ireo lalam-piofanana toa ny momba ny fizahantany, ny lalàna ary ny Polytechnique. « Sambany eto amin’ny tantaran’Analanjirofo ny fotodrafitrasa tahaka itony. Ho vita amin’ny faran’ny volana novambra ny asa rehetra eto », hoy hatrany ny Filoha.
Hisokatra tsy ho ela ny fampianarana
FIFIDIANANA LOHOLONA : « Azo hirosoana na tsy feno aza ny mpifidy vaventy”, hoy ny Filoha lefitry ny Ceni
VAOMIERA MPANADIHADY AO AMIN’NY SENAT: Tetika farany kasaina haminganana ny Fitondrana